Nirahin'Andriamanitra mba ho faty ny zanany mba hananantsika fiainana
"Izao no fitiavana: tsy ny nitiavantsika an 'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika, ka nirahiny ny Zanany ho avotra noho ny fahotantsika" - 1 Jao. 4:10
Rehefa nandetika ny taranak'olombelona tao anaty ahoriana tsy nisy antenaina ny fahotan'i Adama, dia azon'Andriamanitra natao ny nihataka tamin'ny olombelona lavo. Azony natao ny namaly azy ireo tamin'izay mendrika hatao amin'ny mpanota. Azony natao ny nandidy ny anjelin'ny lanitra mba handraraka tamin'izao tontolo izao ny kapoaky ny fahatezerany. Azony natao ny nanaisotra tsy ho eo amin'ny voariny manontolo ity faritra kely feno haizina ity. Tsy nanao izany anefa Izy. Tsy ny nandroaka azy ireo tsy ho eo anatrehany no nataony, fa ny nanakaiky kokoa ny taranak'olombelona lavo. Nomeny ny Zanany Lahitokana mba ho tonga nofo sy ra tahaka antsika. "Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika (..) sady feno fahasoavana sy fahamarinana". Tamin'ny alalan'ny fifandraisany tamin'ny olombelona, tamin'ny naha-olombelona Azy, no nitaoman'i Kristy ny olona hanatona an'Andriamanitra. Notafiny ny maha-olombelona ny maha-Andriamanitra Azy, ary nasehony teo anatrehan'ny tontolon'ny lanitra sy izao tontolo izao lavo ny halalin'ny fitiavan'Andriamanitra ny zanak' olombelona.
Tsy hay tombanana ny halehiben'ny fanomezana atolotr'Andriamanitra ny olombelona. Tsy nihazona na inona na inona ho Azy Izy. Tsy ataon'Andriamanitra hisy afaka hilaza fa afaka nanao be be kokoa na naneho be be kokoa ny fitiavany tamin'ny taranak'olombelona Izy. Tamin'ny nanomezany an'i Kristy dia ny lanitra manontolo no natolony.
Nanaiky hianjadian'ny henatra ilay Avo Indrindra, izay niaraka tamin'ny Ray fony mbola tsy ary izao tontolo izao, mba hahafahany manangana ny taranak'olombelona. Nesorin'ny faminaniana ny Iamba manarona, mba hahafahantsika mibanjina ny seza fiandrianan'ny lanitra. Nesorina izany mba hahafahantsika mahita ilay mipetraka eo ambonin'io seza fiandrianana, dia Ilay manana endrik' olombelona, izay ambony sy misandratra indrindra, Ilay tonga teto amin'izao tontolo izao mba hijaly, hokaravasina, ary notorotoroina noho ny helotsika.
Toy izany no nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany ny olona. Natolony tao amin'i Kristy ny lanitra fray manontolo mba ho afaka hiverina indray ao amin'ny olona ny endrik'Andriamanitra (...) Atolony ho an'ny olona rehetra ny fahasoavany manontolo. — GCB, 01 Oktobra 1899.